Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eRomania nakwiVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eRomania:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala eRomania
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eRomania
● IVisa yegolide eRomania
● Ipasipoti yesibini evela eRomania
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eRomania Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eRomania kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eRomania basebenze ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eRomania zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eRomania, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali eRomania, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eRomania, ukuhlala kwakhona kwesibini ngotyalo mali eRomania, ukuhlala kabini ngobutyalo eRomania, ubumi kunye nokuhlala kutyalo mali eRomania. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo mali eRomania, Ubume bethutyana ngotyalo mali eRomania, Ubumi kwakhona ngesikimu sotyalo mali eRomania, Ubumi ngeenkqubo zotyalo mali eRomania, Ubummi ngotyalo mali eRomania, Ubummi ngeenkqubo zotyalo mali eRomania, Ubumi ngenkqubo yotyalo mali eRomania, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eRomania, ubumi bobabini ngotyalo-mali eRomania, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eRomania, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eRomania, iinkqubo zobumi boqoqosho eRomania, Ubummi ngesikimu sotyalo mali eRomania, Ubummi ngezikim zotyalo mali eRomania, okwesibini ipasipoti eRomania, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eRomania, ipasipoti yesibini eRomania, ipasipoti yesibini yesibini eRomania, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eRomania, ipaspoti yesibini yozakuzo eRomania, ipasipoti yesibini yotyalo-mali eRomania, ipasipoti yesibini yokuba ngabemi eRomania, iskim sepasipoti yesibini eRomania, okwesibini Izikimu zokundwendwela eRomania, iiVisa zegolide eRomania, iiVisa zegolide eRomania, iinkqubo zeVisa zegolide eRomania, inkqubo yegosa yegolide eRomania, eyesibini visa yegolide eRomania, inkqubo yesibini yeg visa yaseRomania, ivisa yegolide ezimbini eRomania, ubumi kunye nevisa yegolide eRomania, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eRomania, ubummi begolide be-visa eRomania, isikimu sevisa yegolide eRomania, izikimu zevisa zegolide eRomania.
"1 ziyeke izisombululo" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eRomania ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eRomania lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 50,000
Intshayelelo iRomania kunye nokuhlala ngokuTyala
Funda kabanzi malunga neRomania
IRomania, lelona lizwe likhulu kumzantsi-mpuma eYurophu; ikhaya elinamahlathi athabathekileyo, iintaba ezimangalisayo, iindlela zamanzi ezizolileyo kunye nemilambo, kwaye ngokucacileyo, iDracula eyaziwayo. Kwiminyaka engaphambili, kukhangeleka ngathi iRomania yayiyeyona ndawo iphambili yabatyeleli kunye neetap zangaphambili, nangona kunjalo, imfihlakalo ekugqibeleni kwaye iimfumba zeempompo zangaphambili ziye zafudukela eYurophu ukuze zikhululeke kolu lonwabo Isizwe saseMpuma Yurophu. Umahluko phakathi kweepesenti ezingama-23.5 zabantu baseYurophu, malunga neepesenti ezingama-25 zabantu baseRomania babonwa njengabasemngciphekweni wentlupheko ngo-2016, kubandakanywa naphezu kokuhlala ngokumangalisayo kwimimandla yephondo. Eli nqanaba liphezulu kubantu abadala abaxhasa abantwana kwiipesenti ezingama-42.5, ngakumbi abagcini abangatshatanga kwiipesenti ezingama-58.2. Kulindeleke ukuba iipesenti ezingama-22 zabemi zihlale phantsi komgaqo wentlupheko.
Izinto ezibandakanya ukufaka izinto, ukungaphazanyiswa kwendalo njengokungcola, isiphithiphithi okanye inkohlakalo, kunye nemiceli mngeni yokugcina amakhaya afudumele kuqikelelwe eRomania yiKhomishini yaseYurophu. Ngaphezudlwana kwesiqingatha sabemi baseRomania bahlala kwizindlu ezizimeleyo ezinegumbi elinye lomntu ngamnye, ngama-96 eepesenti abo banamakhaya abo. Ngaphandle koko, kwi-2016, i-13.8 yeepesenti yabantu baseRomania baveza ukungakwazi ukufudumeza la makhaya, kwaye i-20% yabemi bahlala ngaphandle komthombo ophuculweyo wenzalo.
Uphuhliso lwezezimali lwepesenti ezi-4 zarekhodwa ngo-2018, zehla ukusuka kwipesenti ezisi-7 ezandisiweyo kunyaka ophelileyo, ngokubanzi ngenxa yokunciphisa ishishini elingaqhelekanga. Ukusetyenziswa koluntu lwaseRomania kuluncede uqoqosho, ukunyuka ngokukhawuleza ngenxa yokuncipha kwerhafu, kufutshane ngexabiso lokurhweba kunye nentengiso yenxalenye ye-EU evulekileyo emva kokuba iRomania ijoyine i-EU ngo-2007. ukhuseleko lwemali.
Ingeniso yesiqhelo yosapho ngo-2016 yayimalunga ne- $ 3,300, inyuselo enkulu isuka kwi- $ 700 ngo-2001. Oku kunyuswa kunokwenzeka ngenxa yophuhliso lwezezimali eRomania, imali esebenzayo kwi-EU, kunye nokugxothwa ngokupheleleyo kwerhafu yengeniso kubaxhamli bemivuzo ephantsi, kuthathelwa ingqalelo ukubonakala kwemali okuphawuleka ngakumbi kubantu abazinzileyo ngokukodwa, abenza eyona nxalenye inkulu yabemi baseRomania.
Izinga lokungabikho kwemisebenzi liye lehla laya kwi-3.7 yeepesenti ngo-2018 ukusuka kwi-7.2 yeepesenti ngo-2010. Nangona kunjalo, inqanaba lokungaphangeli kwabantu abatsha liphezulu kakhulu, ngama-16.8 eepesenti, kusenokwenzeka ukuba longeze ukufudukela kolutsha olukhulu olukhangela umsebenzi kunye namathuba okuphila angcono. Kufuneka iqatshelwe, nangona kunjalo, ukuba umsebenzi awugcini abantu ekubeni baphume emngciphekweni wentlupheko. Ngaphezulu kwe-20% yamadoda aseRomania kunye neepesenti ezili-15 zamanenekazi athathelwa ingqalelo emngciphekweni ngo-2016.
Abantu baseRomania bafumana inqanaba lesine elibalulekileyo lobunzima bezinto ezibonakalayo eYurophu. Kwi-2016, iipesenti ezingama-23.8 zabantu baseRomania abakwazanga ukulawula nakweyiphi na imicimbi emine kwezisithoba yezinto ezisisiseko ezibekwe yi-EU, ngokuchaseneyo neepesenti ezingama-7.5 zabantu baseYurophu. Izinto ezibalulekileyo zibandakanya isidlo sangokuhlwa esipheleleyo ngamaxesha aqhelekileyo, ukuhlawulela iindleko ezingalindelekanga, ukhenketho lonyaka, ukufudumala okwaneleyo, isithuthi, impahla yokuwasha iimpahla, umthunzi weTV, ifowuni kunye nokunyamekela iithebhu eziqhelekileyo.
Iindibano ezinje ngovavanyo lwe-2.4 yezigidi zabantu base-Roma kwisizwe banyamezele isantya esiphezulu sentswelo kunelona candelo lilawulayo. Baxhatshazwe ngokwenyani kwaye bathotyelwa kwaye baqhubeka nokukhetha okungapheliyo. Phantse iipesenti ezingama-42 zamaRom akakwazi ukulawula iindleko zokhathalelo lonyango kunye namava ezibi ezandisiweyo zokubonisa kukosuleleka kwentswelo. Umsebenzi we-Roma uvavanywa kwiipesenti ezingama-42 kubafana kunye neepesenti ezingama-19 kubafazi, xa kuthelekiswa nomsebenzi ongaphezulu kwama-60% phakathi kwabantu baseRomania. Abantu abaninzi baseRomani baxhomekeke ekungavunyelweni kwenkululeko esisiseko, kubandakanya nokususwa okunganyanzelekanga, ngoncedo oluncinci kurhulumente kwezentlalo ukunceda ukufunga.
Iipesenti ezingama-7.2 kuphela zabantu baseRomania babonisa ukuba nempilo eyoyikekayo okanye eyoyikekayo ngo-2016 xa kuthelekiswa neepesenti ezi-8.8 zabanye abahlali be-EU. I-UNAIDS yavavanya ngo-2017 ukuba i-16,000 yabantu baseRomania babephila ne-HIV / AIDS, uninzi ngenxa yokuziqhelanisa nococeko olungenakunceda olwabangela indyikitya yokufa ye-AIDS ngee-1990s. Abemi ngokubanzi banekamva xa bengena kwihlabathi elijikeleze iminyaka engama-75, ngaphantsi nje kwesiqhelo saseYurophu seminyaka engama-79.
Ukufuduselwa kwamazwe angabamelwane kunye namazwe achumileyo aseYurophu afana ne-UK, i-Itali ne-Jamani ibe inkulu ukusukela ngeminyaka yoo-1990. Abantu abalindelweyo abazizigidi ezi-3.9 baseRomania bahlala ngaphandle belizwe labo, nto leyo ibangele ukuba abantu behle ngokuthembekileyo. Uqoqosho lwaseRomania kungoku nje lunengxaki yokunqongophala kwabasebenzi abanetalente kunye nokuncipha kokuguquguquka kweengcali zolutsha, okukhuthaza imisebenzi ngurhulumente waseRomania ukuba abuyisele abahlali kwisizwe ngenkuthazo yokubuyiselwa.
Imibutho emininzi yesisa isebenze eRomania okokoko kuyehla ubusoshiyali ngo-1989 ukwenza ilizwe ukuba lakhiwe kwakhona kwaye lisebenze ngcono izihlobo zalo. Ummandla woLuntu usebenze eRomania ukusukela ngeminyaka yoo-1990, ekhonza iintsapho ezingama-58,000 kwaye encedisa ekuthabatheni indawo ixesha lasebusosheni eliqhekezayo, azisa ngemibhobho yamanzi kunye nokungena emanzini. I-UNICEF isebenza norhulumente waseRomania kunye nemibutho eyahlukeneyo ukwenza amaqela akhuthazayo abantu baseRomania abaphila nesifo sikaGawulayo kunye nokuxhasa uphando lwe-HIV / AIDS. Amalinge ambalwa eBhanki yeHlabathi nawo ayaqhubeka, kubandakanya nokuzibophelela ekubuyiseleni phambili iinkqubo zoncedo kurhulumente waseRomania kunye nokunika uqeqesho olungcono kunye nokhathalelo lwempilo. Enkosi ngentshukumo enkulu apho ilizwe lenza khona, izizathu zokufudukela apha ziyaqhubeka nokukhula.
Indawo yentengiso ekhulayo
Ngenxa yobukho obukhulayo beenkampani zokuyila zehlabathi, ezinje ngeAccenture, iingcango ezivulekileyo zokuphuma kwimpompo kwiindawo ezahlukeneyo kunye neziyelelane ziyaqhubeka nokwanda. Ngentengiso yemisebenzi engagungqiyo, ungahambela eRomania ngaphandle kokuqonda, uqonda ukuba usiya kwisizwe esineendawo zentengiso kunye noqoqosho.
Umzamo omncinci wokuphila
Inye into ngaphandle kwamathandabuzo, iRomania ineendawo ezininzi zokuphila, phakathi kwezona zincinci kwi-EU. Kukhuselekile ukuchaza ukuba nawuphina umntu waseYurophu ogqiba kwelokuba afudukele eRomania angaphila ubomi obonwabileyo, obufanelekileyo kunye nokwamkelwa kwimveliso yomzamo omncinci, ukulungeleka okufanelekileyo, kunye nezothutho.
Yindawo ekhethekileyo yeziko lehlabathi
Kubonakala ngathi iBucharest, iBrasov, iLași, kunye neTimișoara ziye zaba zizichaso ezaziwayo malunga nenxalenye yeefemu ezilungileyo zehlabathi. Ke xa ithuba lokuba ukhangele ubuchwephesha kwindawo yeTekhnoloji yoLwazi, yiya eRomania ngeAccenture yokuhamba okucacileyo kunye nokuvuleka kobizo. Kwi-Accenture uya kugqiba ukusebenzela isahlulo seempawu zokuqhuba zeyunivesithi, ukubonelela ngoncedo oluphezulu kunye nokuxhasa.
Olukhulu kwaye luqinile ulwaneliseko lomntu
Ngokukhululeka kokuphila kunye nokwamkelwa okukhulu kuyo yonke imbeko onokuyifuna, ulwaneliseko lomntu kuyo yonke iRomania yinto eqhelekileyo nesesikweni. KwiRomania, uya kuziva ngathi usondela kulunge ngakumbi, ulwaneliseko lobuqu olungcono kunye nomdibaniso ofanelekileyo weendleko zokuhlala eziphantsi kunye nezinto ezintle zokusingqongileyo.
Ukuphuhlisa umculo kunye nenkcubeko yobugcisa
IRomania sele ibe yenye yezona zinto ziphikisayo kumculo nakwimibhiyozo yobugcisa eYurophu. Kukho ukuzimisela okubanzi kweekonsathi ukujonga ngaphezulu kakhulu kwiklasi nganye yomculo ovela kwi-jazz, i-elektroniki, ezizimeleyo, iliwa kunye nepop, kunye nezinto ezothusayo zokusingqongileyo zokuhamba nazo. Nokuba yeyiphi na indawo enomdla kumanor, amaphupha emnandi, ulwandle oluhle olunentlabathi, okanye iindawo ezimnandi namachibi, isigqibo sesakho!
Ukusonga izinto, umbono othandekayo omangalisayo.
Inye kuphela into ekufuneka uyazi ngempumelelo kukuba iRomania irhangqwe bubuhle obuqhelekileyo obuqhelekileyo; imithi enomthi enomtsalane, izitrato ezipholileyo, amachibi agqwesileyo, noyilo olunomtsalane. Ukuba uyayithanda indalo nangaphandle, ngelo xesha oku kufanele ukuba kube lilizwe elifanelekileyo lokufuduka kuwe.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lweRomania
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala eRomania
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania
Imisebenzi yezoqoqosho ixesha elide lokuhlala i-visa (D / AE)
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eRomania
Emva kweminyaka esi-8 linda ngokwendalo
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseRomania
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania
Kutheni usiya kwindawo yokuhlala ngokutyala iRomania
IRomania yangena kwi-EU ngo-2007 kodwa ayikabinalo ilungelo lokusebenzisa imali ye-Euro. Kutshanje kufanelekile ukuba yinxalenye yendawo yaseSchengen. IRomania inohambo lokuhamba ngaphandle kwe-visa kumazwe ayi-153, unyaka omnye, iimvume zokuhlala ezinokuvuselelwa zabelwa ulondolozo lwe-EUR 100,000. Imvume yethutyana inokuqhubeka kwaye ihlaziywe rhoqo kwiminyaka emithathu ukuba utyala imali kwi-EUR 500,000 okanye wenza imisebenzi engama-50. Emva kokuba neminyaka emihlanu isibini kunye nabantwana abancinci, ungafaka isicelo sokuhlala ngokusisigxina. Ubumi babiwa kuphela phantsi kweemeko ezingqongqo emva kokuhlala iminyaka esi-8 kweli lizwe.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eRomania insite
Kulindeleke ukuba utyale ubuncinci i-EUR 100,000 kwishishini elidala imisebenzi yexesha elizeleyo eli-10, okanye i-EUR 150,000 kwintsebenziswano edala imisebenzi yexesha elipheleleyo eli-15. Ukudala imisebenzi yinto ephambili kodwa kwangaxeshanye kunokuba nzima. Ngotyalo-mali lwe-EUR 150,000 ubuncinci okanye ukudala imisebenzi engama-25, ubungqina bemali buyafuneka kodwa akunjalo ukuba utyala imali kwi-EUR 200,000 okanye wenza imisebenzi engama-50. Ubungqina bokuhlala buyimfuneko kodwa awunyanzelwanga ukuba uthenge ipropathi. Nangona kunjalo, izindlu nomhlaba zitshiphu xa zithelekiswa namanye amazwe.
Imfuno yemali eRomania
Isicwangciso seshishini sibandakanya ixabiso elipheleleyo lotyalo-mali lwakho, apho uceba ukutyala imali kunye nenani lemisebenzi oza kuyidinga lifunwa. Uya kuba neenyanga ezili-12 zokwenza utyalomali kwaye ulungiselele uyilo lweminyaka emithathu lokukhula kweshishini lakho. Imali efunekayo iya kufuneka ifakwe ebhankini yaseRomania.
Kuya kufuneka unikezele ngamaxwebhu okufumana umvuzo owonelisayo eRomania ye-EUR 700 ngenyanga ukuba unesabelo senkampani okanye i-EUR 500 ngenyanga ukuba ungumhlobo. Ubungqina bokuba unokuzixhasa kunye namalungu osapho nawo uyafuneka.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eRomania
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseRomania kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha kweRomania ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eRomania ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eRomania, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eRomania kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eRomania okanye kwiVisa yaseGolide evela eRomania okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eRomania okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eRomania, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IRomania okanye i-offshore, izibonelelo zabasebenzi eRomania kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi naseRomania nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo yabemi baseRomania:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeRomania, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena iRomania, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eRomania, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo mali eRomania, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eRomania kunye nefemi yokubonelela ngokufuduka eRomania.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali ezivela eRomania.
Iinkqubo zevisa zegolide eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eRomania ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eRomania kwiiNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eRomania ngombono wokuba abathengi mabafumane imbuyekezo entle kutyalo mali eRomania, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokutyala eRomania. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eRomania abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo eRomania, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi baseRomania ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eRomania.
Kufuneka uyazi-Indawo yokuhlala yaseRomania ngotyalo-mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eRomania kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu ngenkxaso yokuhlala kwakho ngempumelelo ngootyalo mali eRomania. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali eRomania kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eRomania okanye eRomania, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala iRomania kubaxumi ukufumana imvume yokuhlala eRomania kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yaseRomania, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili ngokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala iRomania kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali seRomania. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokutyala iRomania kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho afumane isicelo sokutyala imali eRomania, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo baseRomania.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eRomania samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eRomania kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eRomania:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zaseRomania azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi bezixhobo kunye neembumbulu ukusuka okanye ukuya eRomania.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo mali zaseRomania azinikezelwanga ukuba zibekwe esweni ubuGcisa eRomania okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eRomania.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eRomania awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eRomania.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali kweRomania ayisiyonto yabantu abajongana nezinto zeMfuzo eRomania.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zaseRomania ayisiyonto yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eRomania.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeRomania ayifumaneki kubantu baseRomania abajongana norhwebo, ukugcinwa eRomania, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali kweRomania ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo kweRomania ayizizo iinkolo zonqulo kunye noncedo lwabo eRomania.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Romaniya ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eRomania.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eRomania abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eRomania.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseRomania kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eRomania ukuze kuvunywe isicelo Kuhlala ngotyalo-mali eRomania.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo mali eRomania yotyalo-mali, yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu eRomania.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseRomania, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo ngeenkonzo zotyalo-mali zaseRomania zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eRomania.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona kubabini eRomania exhasa abathengi kunye neentsapho zabo eRomania.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eRomania kunye neearhente zomthetho zaseRomania ezibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha yaseRomania kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eRomania nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eRomania
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iRomania, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala eRomania kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwenzayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zoBuhlali ngokuTyala imali eRomania
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala iRomania nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseRomania, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, indleko yokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali yaseRomania kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa kweRomania
Inkqubo yemvume yokusebenza eRomania
Ukuhlala okwethutyana eRomania
Indawo yokuhlala isigxina eRomania
Izindlu zoonozakuzo kunye nabathunywa baseRomania
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eRomania kunye nezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eRomania ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho eRomania ngokutyala, thina njengeqabane lakho kwiRomania, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eRomania ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali eRomania, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiRomania, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseRomania abasenza sithenge iRomania kunye namazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nakwihlabathi liphela kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye nezorhwebo eRomania ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala eRomania ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eRomania nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eRomania okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eRomania zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eRomania
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eRomania uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yobuqu eRomania kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eRomania, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eRomania
Ngaba ufuna ukubonisana eRomania, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eRomania Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eRomania okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali IRomania ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eRomania ukuqala kwangoko eRomania.
Iinkonzo ze-HR eRomania
yethu Inkampani yabasebenzi eRomania inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona Izithuba ezikhoyo eRomania free.
Iifowuni eziNgenayo zeRomania
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eRomania kunye amanani abonakalayo eRomania Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eRomania
Accounting, ngenxa yenkuthalo eRomania kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eRomania
Ukuseta ishishini eRomania
Emva kokuhlala ngokutyala eRomania, ukuseta ishishini kwi Romaniya.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eRomania
Uyilo lwewebhu eRomania
Uphuhliso lwezorhwebo kwiRomania
Uphuhliso lwewebhu eRomania
Uphuhliso lweBlockchain eRomania
Uphuhliso losetyenziso eRomania
Uphuhliso lweSoftware eRomania
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo mali eRomania
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo mali eRomania kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iRomania, sizinkokeli, inkampani yethu yezomthetho eRomania ineearhente zokufudukela eRomania, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini enkonzo eRomania kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseRomania kunye neentsapho zabo. Indawo esihlala kuyo liqela lotyalo-mali laseRomania libonelela ngezisombululo eziyimpumelelo zabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eRomania, xa imvume yakho yokuhlala eRomania yamkelwe.
Amandla egqwetha laseRomania ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuHlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eRomania. Ukuba uhlala eRomania okanye uceba ukutyelela iRomania, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eRomania kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseRomania. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseRomania.
Imibuzo ebuzwa rhoqo -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eRomania
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala eRomania?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseRomania ngotyalo-mali kuqoqosho lweRomania ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala eRomania, ukuhlala ngenkqubo yotyalo mali yeRomania. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo mali eRomania, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eRomania, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eRomania kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eRomania, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo mali eRomania, kunye neefem zokubonisana nabantu abafikayo. eRomania.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali zaseRomania | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eRomania | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eRomania | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eRomania | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseRomania
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo mali eRomania?
Ubummi ngotyalo-mali eRomania, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseRomania ngotyalo-mali kuqoqosho lweRomania ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl njl. Faka isicelo sobummi ngotyalo-mali eRomania, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseRomania exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eRomania, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eRomania, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eRomania nangobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo mali baseRomania, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eRomania, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukayo eRomania.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eRomania | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eRomania | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eRomania | Abatyali mali abafikelelekayo eRomania | Abatyali mali abangenakufikeleleka eRomania | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eRomania
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eRomania?
Ipasipoti yesibini eRomania, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseRomania ngotyalo-mali kuqoqosho lweRomania ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini ukuya eRomania, inkqubo yesibini yokundwendwela iRomania exhaswa yi Iinkonzo zokundwendwela zesibini eRomania, ngamagqwetha esibini eepasipoti eRomania, awona magqwetha esibini aphambili eRomania nangabacebisi bepasipoti abaphambili baseRomania, abasebenza kwezona arhente zimbini zokundwendwela eRomania, kunye neefem zokubonisana nabantu zokungena eRomania.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeRomania | Iiarhente zokundwendwela zesibini eRomania | Amagqwetha esibini epasipoti eRomania | Igqwetha lesibini lokundwendwela eRomania | Abacebisi bokundwendwela besibini baseRomania
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eRomania?
IVisa yegolide eRomania, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eRomania ngotyalo-mali kuqoqosho lweRomania ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eRomania, inkqubo yegosa yegolide yeRomania exhaswa yi Iinkonzo zevisa zegolide zeRomania, ngamagqwetha egolide aseRomania, awona magqwetha egosa aseRomania, kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo ngeRomania, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eRomania, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukayo eRomania.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeRomania | Iiarhente zevisa zegolide eRomania | Amagqwetha egosa egolide eRomania | Amagqwetha egosa egolide eRomania | Abacebisi begosa begolide baseRomania
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eRomania?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eRomania yi-EUR 50,000.
Ngaba uyabonelela ngenkxaso yezomthetho eRomania yokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu eRomania kunye neearhente zaseRomania zibonelela ngenkxaso kubuhlali ngokutyala eRomania.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eRomania kubiza?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali eRomania kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo mali eRomania yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngokuTyala eRomania, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yoBuhlali kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala eRomania okanye nge-visa yomtyali mali eRomania?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi balo naliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eRomania ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo mali eRomania ukusuka eAfrika, ukuhlala kwakhona kutyalo mali eRomania ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona kutyalo mali eRomania ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali eRomania ukusuka eMalaysia, ukuhlala kwakhona kutyalo mali eRomania ukusuka eBangladesh, ukuhlala kwakhona ngokutyala eRomania ukusuka eIndonesia, ukuhlala kwakhona kutyalo mali eRomania ukusuka eSri Lanka, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eRomania ukusuka eNepal, ukuhlala kwakhona ngokutyala eRomania ukusuka eIndiya kunye nokuhlala kwakhona. Ngotyalomali eRomania ukusuka kwi-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali kweRomania
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo mali eRomania
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eRomania
Ulwazi loLoliwe (iBucharest) - (021) 9521; www.cfunikoi.ro;
Ikomiti yaseYurophu yeNgingqi- https://www.cor.europa.eu
IBhunga leManyano yaseYurophu- http://www.consilium.europa.eu
URhulumente waseRomania- http://www.gov.ro
IGunya leLizwe leMpahla neZinto eziThengiswayo khanic.cz;
Inombolo engahlawulelwayo yabakhenkethi (inqwelomoya) - 0800.86.82.82;
Amapolisa aseRomania - www.kwyipyung.ro.
IOfisi Yezokhenketho kaZwelonke yaseRomania: http://romaniatourism.com/
Icandelo loMphathiswa Wokuphengulula KwaseRomania: http://www.dprp.gov.ro/
Iprofayile yelizwe ye-BBC iRomania: http://www.bbc.com/news/world-europe-17776265
Uvavanyo ngokubanzi lokuNgena kwelinye ilizwe (i-ORI): http://ori.mai.gov.ro/home/index/en
Iqela lezorhwebo laseRomania neRhwebo: www.azlise.ro
Ukuvavanywa ngokubanzi kwamapolisa oMngcele waseRomania: http://www.politiadefrontiera.ro/
Inkonzo yoNcedo olungxamisekileyo yefowuni yoVuselelo kunye nokwandiswa (i-SMURD): http://www.smurd.ro/
Inkqubo yeZinto zikaNcedo eziNgxamisekileyo kaZwelonke: http://www.112.ro/
Iinkonzo zabaMeli kwi-Intanethi: https://www.econsulat.ro/
Ulwazi kubabhalisi beefowuni - i-118.932; www.118.932.ro
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle eRomania: www.mae.ro
IPalamente yaseYurophu- http://www.europarl.europa.eu
Ubambiso kwiRiphabhlikhi yaseRomania eLithuania (yamkelwe kwakhona eLatvia) http://vilnius.mae.ro/en
Indlu ye-Inshurensi yezeMpilo yeSizwe - www.casa.ro.
IGunya leNkcubeko leLizwe: http://www.customs.ro/
I-Visa on-line: http://evisa.mae.ro/
Inkampu yehlobo yabantwana abasuka kwiRomania diaspora: http://www.dprp.gov.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-programul-de-tabere-arc-2017-2/
Isikhululo senqwelomoya saseBucharest Otopeni - (021) 204.10.00; www.icpisi.ro;
iOfisi yaseRomania yokuFuduka- http://ori.mai.gov.ro/;
Isimaphambili kwiRomania: +40; ngolwazi oluthe kratya yiya ku www.treismguide.ro/x/prefixe;
Amashishini amakhulu esizwe eRomania http://tnf.ro/
IPalamente yaseRomania- http://www.parlament.ro
Umda wamapolisa waseRomania- http://www.politiadefrontiera.ro/.
I-ambulensi, amapolisa, abacimi-mlilo - 112;
IKomiti yezoQoqosho nezeNtlalo yaseYurophu- http://www.eesc.europa.eu
INkqubo yeSizwe yaseRomania yoLwazi lweShishini: http://www.snia.ro/
Amapolisa asemida - (021) 201.33.09; www.kwikuc.ilo;
Ulawulo lukaMongameli-http://www.presidency.roUkumelwa ngokusisigxina kweRomania kwi-European Union-https://ue.mae.ro/
Umda wamapolisa waseRomania- www.kwikuc.ilo.
Isikhululo senqwelomoya saseBucharest Baneasa - (021) 232.00.20; www.citydiktsa.ro;
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eRomania , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eRomania